DAAWO VIDEO Sir Shirqool Imaraadka & Itoobiya oo Uga Digtey Inuu Heshiisiyo Somaliland Iyo Farmaajo Berbera - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO VIDEO Sir Shirqool Imaraadka & Itoobiya oo Uga Digtey Inuu Heshiisiyo Somaliland Iyo Farmaajo Berbera
DAAWO VIDEO Sir Shirqool Imaraadka & Itoobiya oo Uga Digtey Inuu Heshiisiyo Somaliland Iyo Farmaajo Berbera
February 15, 2020 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Somaliland, Wararka Maanta 0
Balaadhinta Dekadda Magaalada Berbera iyo kulanka dhex mari doona madaxda Somaliland iyo Soomaaliya ayaa ka mid noqon doona qodobbada laga wada hadlay ee u dhexeeya Raiisel Wasaaraha Itoobiya Aby Ahmed iyo hoggaanka Isutagga Imaaraatka carabta ee toddobaadkan.
Raiisel wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa soo gaadhay magaalada Abu Dhabi fiidnimadii khamiista si uu wadahadalo ula yeesho dowlada martida loo yahay ee ku saabsan iskaashiga ganacsiga iyo dadaallada lagu doonayo in nabad laga helo geeska Afrika.
Video Halkani Hoose Warbixin
Abiy waxaa garoonka diyaaradaha ee Madaxweynaha ku soo dhoweeyay Sheikh Abdullah bin Zayed, Wasiirka Arimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah, iyo Sheikh Theyab bin Mohamed, Gudoomiyaha maxkamada Abu Dhabi.
Sheikh Abdullah ayaa soo dhoweeyay Abiy wuxuuna ka hadlay xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal iyo sidii loo xallin lahaa arrimaha danaha labada dhinac ka dhexeeya.
Abiy waxaa wehelinaya xaaskiisa, Zinash Tayachew, Dr Hirut Kassaw, Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska, Adanech Abebe, Wasiirka Dakhliga, iyo Muferiat Kamil, Wasiirka Nabadda ee Itoobiya.
Itoobiya iyo Imaaraadku waxay iska kaashadeen Somaliland balaadhinta dekeda berbera oo mar la dhamaystiro waxay noqon doontaa mida ugu weyn gobolka.
Shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ee DP World ayaa ku ballaarinaysa dekeda qiime dhan 442 Milyan oo doollarka Mareykanka ah waxaana sidoo kale la rajaynayaa inay dejiso aag xorriyadda dhaqaalaha kaabaya kobcinta Dekadda Berbera oo ah xarun ganacsi oo gobolka ah.
Soomaaliya waxay ka soo horjeedday ballaarinta dekeda oo sheegtay in Somaliland xaq u lahayn inay gasho heshiisyo caalami ah.
Somaliland waxay ka go’day Soomaaliya 1991-kii waxayna ku dhawaaqday madax-bannaanideeda. Labada dal waxay ku sugnaayeen ilaa iyo waqtigaas.
Laakiin horaantii toddobaadkan, Raiisel Wasaaraha Itoobiya wuxuu jebiyey kulan u dhaxeeyay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi iyo madaxweynaha Soomaaliya C / llaahi Farmaajo oo ka dhacay Addis Ababa, wadahadallo socday muddo saacad ah.
Itoobiya iyo Imaaraadku waxay rumeysan yihiin in xal waara oo dhexmara Soomaaliya iyo Somaliland ay muhiim u tahay danahooda geeska Afrika.
Tani waa safarkii labaad ee Abiy uu ku tago UAE wax ka yar hal sano.
Imaaraadku wuxuu ka mid ahaa waddammada khaliijka ee Abiy booqday sanadkii hore taas oo qayb ka ahayd taageerada gobolka, gaar ahaan dib-u-habaynta dhaqaalaha. Amiirka Boqortooyada ayaa sidoo kale booqday Addis Ababa 2018.
Xiriirka Ethiopia – UAE wuxuu ahaa mid kor u sii kacaya mudada sanadka 2018.
Tobankii sano ee la soo dhaafay, Imaaraadku wuxuu si tartiib tartiib ah u kordhiyay joogitaankiisa Geeska Afrika, isagoo adeegsanaya mashaariicda horumarineed iyo kuwa samafalka si sare loogu qaado sumcadiisa.
Waxay si weyn maalgashi ugu sameysay dekedaha, saadka iyo hormarinta ganacsiga, si ay u xasiliso boqortooyadeeda dekedaha guud ahaan istiraatiijiyadda Bab el-Mandeb Strait ee Badda Cas, si ay si weyn kor ugu qaaddo ganacsigeeda caalamiga ah iyo awoodda jilicsan ee gobolka.
Shirkadda Emirati-ka laga leeyahay ee DP World furitaanka deked ay ka furatay Jabuuti sanadkii 2008 waxay muujisay jiritaanka horumar ka jira Geeska Afrika oo aan markaas fogeyn.
Itoobiya waxay u adeegtay sidii marin muhiim ah oo lagu kobcin karo saameynta UAE, halkaas oo Abu Dhabi oo ay weheliso Sacuudiga ay gacan ka geysteen wada-hadal nabadeed oo lala yeesho Ereteriya, kadib dagaal laba sano qaatay oo dhex maray labada dawladood.
Waxay tan iyo markii ay sii wadday kaalmada ay siiso Itoobiya, sidoo kale fulisa mashaariicda horumarineed ee muhiimka ah. Imaaraadku wuxuu kaloo dhistay dhuumaha saliida ee u dhexeeya Eritrea iyo Itoobiya, shirkadaha Imaaraatku waxay kordhiyeen maalgashiga gaar ahaan gudaha Itoobiya.
Tallaabooyinka noocan oo kale ah ayaa sidoo kale ah isku day ay kula tartamayaan Turkiga, Iran iyo Qadar, oo xiriirkooda sii kordheysa ee wanaagsan uu kala dhexeeyo waddamada bariga Afrika ay la kulantay Abu Dhabi.
Dib u dhac ku yimid himilooyinkii siyaasadeed ee UAE ee Geeska Afrika, si kastaba ha noqotee, waa xiriirkii ay la laheyd Soomaaliya oo ku sii dhawaatay Turkiga, oo ah xulafada Imaaraatka ee muhiimka ah.
Iyada oo taa laga jawaabayo, Imaaraadku wuxuu diiradda saaray taageerada uu siiyo gobollada iskeed u madaxbannaan ee Soomaaliya.
Imaaraadka Carabtu iyo Itoobiya ayaa bishii Feberaayo ee la soo dhaafay isku afgartay inay iska kaashadaan sidii ay Somaliland ugu rogi lahaayeen “xarun ganacsi oo weyn,” taas oo ka caawinaysa xulafada Imaaraadka ee Itoobiya inay ka helaan marin ganacsi oo ballaadhan, isla markaana ay sii xoojiso awoodda Imaaraatka UAE ganacsi ahaan iyo awoodooda dhaqaale.
Intaas waxaa sii dheer, isbahaysiga ay la leedahay Itoobiya, oo sidoo kale maalgashadeysa dekada Berbera ee Somaliland, waxay ka caawisay UAE inay si weyn gacanta ugu dhigto.
Imaaraadku waxa kale oo uu isku dayey inuu ka dhiso saldhig millatari iyo badweyn oo ku yaal Somaliland.
Aaran-Jaan & Deni oo ay ka dhex taagan tahay & Wararkii u dambeeyey
Soomaliland”Puntland waxay Farmaajo Ku haystaa Xildhibaanada Dhulbahante Soo Xulistooda.
September 11, 2020 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Somaliland, Wararka Maanta 0
XOG:Muxuu Yahay Khilaafka Raysal wasaare Khayre Iyo Madaxweyne Farmaajo,Xagee Salka Ku hayaa?
June 6, 2020 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 1
Cabdiraxman cabdishakuur oo Sheegay In Ninkii Dhaawacay In Wasiir Loo Magacaabay.
October 20, 2020 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 1